अकबरे खुर्सानीबाट ईलामका मदनलाई बनायो करोडपति, यसरी जोडे डेढ करोडको सम्पत्ति – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/अकबरे खुर्सानीबाट ईलामका मदनलाई बनायो करोडपति, यसरी जोडे डेढ करोडको सम्पत्ति
ईलाम । ईलामको सुर्योदय नगरपालिका–१२ आठघरेका मदन राई लामो समयदेखि कृषि पेसामा छन् । उनले ठूलो क्षेत्रफलमा व्यवसायिक रुपमा अकबरे खुर्सानी खेती गरेर मनग्य आम्दानी पनि गर्दै आएका छन् । वर्षको झण्डै १० लाख रुपै याँको अकबरे खुर्सानी बिक्री गर्ने उनले यसैको मुनाफाले डेढ करोड मूल्य बराबरको ३० रोपनी जग्गा समेत जोडे ।
अकबरे खुर्सानी नेपालको धेरै भू-भागमा उत्पादन हुन्छ । कतिपय किसानले व्यवसायिक ढंगले अकबरे खुर्सानी उत्पादन गर्छन् । इलाम, पाँचथर जस्ता ठाउँ त अकबरे खुर्सानीकै लागि कहलिएको छ। अकबरे हाम्रो रैथाने उत्पादन हुन् । दोमट एवं केही चिम्टाइलो माटोमा अकबरे खुर्सानी राम्ररी सप्रन्छ । भिरालो एवं पाखो बारी पनि अकबरेका लागि उपयुक्त मानिन्छ । त्यसो त कतिपयले घरको छतमा, बार्दलीमा, बगैंचामा समेत अकबरे खुर्सानी रोप्ने गर्छन् ।
यो भिडिओमा उनले हामीसँग आफ्नो अनुभव बाँडेका छन् । अकबरे खुर्सानी खेती कसरी गर्ने ? यसको बजार कस्तो छ ? यो कस्तो ठाउँमा हुन्छ ? मुनाफा कति हुन्छ ? लगायतका प्रश्नहरुमा उनले खुलेर जवाफ दिएका छन् । कृपया भिडिओ अन्तर्वार्ता पूरै हेर्नु होला । भिडीयो यहाँ लिंकमा छ ।